प्रमोसन भएपछि खुसी भएका गुरुङ्ग दशैँमा आउँछु है भन्दै डिउटी गएका थिए ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/प्रमोसन भएपछि खुसी भएका गुरुङ्ग दशैँमा आउँछु है भन्दै डिउटी गएका थिए !
प्रमोसन भएपछि खुसी भएका गुरुङ्ग दशैँमा आउँछु है भन्दै डिउटी गएका थिए !
गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएका नेपालीहरुले भारतको सिमा रक्षा गर्दा अहिले सम्म थुप्रैको ज्या’न ग’एको छ । भारतले सिमा वि’वाद भएका स्थानमा गोर्खा सैनिकलाई पठाउने गरेको छ ।
सिमानामा भारतको भूमी रक्षा गर्दा ज्या’न गु’माएका नेपालीहरुमा सम्बुर गुरूङको पनि नाम थपिएको छ । उनी गुल्मीका हुनुहुन्छ ।
उक्त घ टनामा घा’इते भएका गुरुङको अस्पताल पु¥याउनुअघि नै निध न भएको बताइएको छ । भारतीय रक्षा प्रवक्ता कर्णेल देभेन्द्र आनन्दले गुरुङ एक साहसी, उच्च मनोबल भएका र इमान्दार सैनिक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘उँहाको कतर्व्य पालनाका क्रममा गरेको उच्च ब’लिदानीको मुलुक सधैं ऋणी रहनेछ’, उनले भनेका छन् । भारतीय सेनामा कार्यbरत हवल्दार सम्बुर गुरूङले दिनहुँ घरमा फोन गर्नुहुन्थ्यो । उँहाको श्रीमती बालमाया गुरूङ भने काठमाडौं बस्दै आउनुभएको छ ।
दिनहुँ जसो श्रीमान संग उहाको कुरा हुनथ्यो । विहिवार पनि उँहाको श्रीमानसंग कुरा भयो । तर त्यतीबेला श्रीमान ले आफु डिउटीमा जान लागेको कुरा सुनाउनु भएको थिएन । तर शुक्रबार बिहानै अचानक भएको यहि घ’टनामा उहाँको ज्या’न ग’यो ।
सम्बुरको छोरी इलाले बुवासंग बुधवार बिहान कुरा गरेका बताउनुभयो । शुक्रबार बिहान इला सुति’रहेकै बेलामा फोन आयो । आमा ए’क्कासी रु’न थालेपछि इलाले थाहा पाउनुभयो बुवा यो संसारमा हुनुहुन्न ।
उँहालाइ फोनमा कसैले भन्यो तिम्रो बुबा सहि’द हुनुभयो।’ भारतीय सेनामा सम्बुर भर्ती भए’को १८ वर्ष पुगेको उहाका आफन्तले जनाएका छन्। आफन्तका अनुसार उहा गत माघमा घर छुट्टी आएर फर्कि’एर सम्बुर मिल्यो भने द&शैं मान्न घर आउने योजनामा हुनुहुन्थ्यो।
आरुघाट गाउँपालिका–१, मान्वुस्थित माझ’गाउँका सम्बरले गत कात्तिकमा घर आएका बेला हवल्दार भइसकेकाले अब केही वर्षमा रिटायर्ड ‘लाइफ’ बिताउने कुरा आफन्त र छिमेकीलाई सुनाउनु’भएको थियो । जागिरको अवधि पनि धेरै वर्ष थिएन, यस्तो खबर सुन्नुपर्‍यो ।
१८–१९ वर्ष त भइसक्यो । अब धेरै वर्ष जागिरको अवधि थिएन ।’ प्रमोसन भएपछि खुसी हुनुनुन्थ्यो उँहा । भा’रतीय सेनामा कार्यरत गोरखाका सम्बर गुरुङ छुट्टी मिलाएर गाउँ आइर’हनु हुन्थ्यो । परिवार र छिमेकीसँग रमाउनुहुन्थ्यो ।
तर तिनै छिमेकी र आफन्तले शुक्रबार बिहानै दु:खद खबर सुन्नुपर्‍यो ।भारतको छिमेकी मुलुक कसैसंग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । सिमानाका विषयमा भारतको सबै छिमेकी मुलुक’संग राम्रो छैन ।
केही दिन अघि चीनसंगको घ’टनामा भारतीय सेनाका कर्णेल सहित २० जनाको नि’धन भएको थियो । नेपालसंग पनि पछिल्लो समय सिमानाकै कारणले सम्बन्ध विग्रिएको छ । – ताजा खबर
प्रधानमन्त्री ओलीले बोले गम्भिर झुटो ! यसरी भयो पर्दाफास
मकवानपुरमा चट्याङ लागेर दुई युवतीको घटनास्थलमै मृत्यु, १४ बर्षिय किसोर घाइते